IDisney ithatha iqiniso langempela isinyathelo esisodwa nale jakethi emangazayo | Izindaba zamagajethi
IDisney ithatha iqiniso langempela isinyathelo esisodwa nale bhantshi elihehayo
Ngaphandle kokuthi iningi lethu lingabathandi bezobuchwepheshe, siyabona ukuthi kancane kancane umhlaba wezinto ezingokoqobo uguquka kuze kube yilapho usuba yikho konke esathenjiswa kona, okungenzeka ukuthi kusekude phambili, mhlawumbe into yokugcina abagcina ngayo ukwethula abafana beDisney basinika amaphiko qala ukukujabulela ngokweqiniso konke lokhu ubuchwepheshe obumnandi obunikezayo.
Kulesi senzakalo, iDisney kubonakala sengathi ikwazile ukudlulela phambili, hhayi ngokwemidwebo kanye nokunye, kepha ngokwakha i Ijacket engakwenza ekugcineni ukholwe ukuthi ungaphakathi kwalelo zwe elibonakalayo nolibonayo sibonga isigqoko sokuvikela ikhanda, okwamanje, okufanele ngaso sonke isikhathi usigqoke.
1 IDisney ikwenza ukholelwe ukuthi inyoka ikhuphuka emzimbeni wakho ngenxa yale bhantshi ehlukile elithambile
2 Bambalwa kakhulu abantu abangena emhlabeni weqiniso elibonakalayo ngenxa yokuncane okunikezwa yilobu buchwepheshe, okwamanje
IDisney ikwenza ukholelwe ukuthi inyoka ikhuphuka emzimbeni wakho ngenxa yale bhantshi ehlukile elithambile
Ukungena emininingwaneni ethe xaxa, njengoba ubona kuvidiyo etholakala ngaphezu kwale migqa, onjiniyela bakwaDisney bakhe uhlobo prototype efana kakhulu nejakhethi kodwa ifakwe uchungechunge lwama-airbags engalingisa ingcindezi yezinto ezithile osebenzisana nazo emhlabeni obonakalayo. Akungabazeki ukuthi into, njengoba besho kuDisney, ihloselwe ukwandisa kakhulu ngangokunokwenzeka yonke imizwa oyizwayo lapho udlala umdlalo wevidiyo noma ubuka i-movie.
Ukwenza le jakhethi ibe umphelelisi ophelele wokubalekela kwakho emhlabeni obonakalayo, onjiniyela bakwaDisney kuye kwadingeka thuthukisa isoftware ekhethekile ukulawula wonke amagumbi noma izikhwama zomoya. Ngenxa yalolu hlelo oluyinkimbinkimbi, ibhantshi lingakhiqiza imizwa ehlukahlukene kakhulu engeza izinhlobo ezintsha zokubona nokujula kokungokoqobo.
Ngokuya ngezitatimende zalabo ababhekele le phrojekthi:
Isisusa esiyinhloko salolu cwaningo bekuwukuthuthukisa inani lokuzijabulisa lama-movie nokuhlangenwe nakho okususelwa kumdlalo ngokunikela ngempendulo yamandla ezindaweni ezahlukahlukene zomzimba wethu.
Bambalwa kakhulu abantu abangena emhlabeni weqiniso elibonakalayo ngenxa yokuncane okunikezwa yilobu buchwepheshe, okwamanje
Ngaphandle kokungabaza sikhuluma ngobuchwepheshe okuthi, yize kusekude ukuba bufike, iqiniso ukuthi linganikeza lokho kugxuma okuvusa amadlingozi okufunwe ngabasebenzisi abaningi bangempela isikhathi esithile. Ngalesi sikhathi uFi-orce JacketYile ndlela le prototype yokuqala, eyenziwe ngokuhlanganyela ngonjiniyela abavela eMIT Media Lab, Disney naseCarnegie Mellon University, ebhabhadiswe ngayo, inganikeza imizwa ethokozisayo ezokucwilisa ezweni elisha.
Ngaphakathi, ibhantshi lakwaDisney aliqukethe okungaphansi kwalokho Amakamelo afuthwayo angama-26 ukuthi ingazala kabusha, njengoba kukhangisiwe kufayela le- iphepha okushicilelwe ukumemezela lolu cwaningo, hhayi ngaphansi kwemiphumela eyishumi nambili. Phakathi kwabo, izenzo ezahlukahlukene zenziwe ngendlela ethembekile, njengokugona, ukushaya kanye nenyoka eshibilika emzimbeni wonke.
Le mizwa ingadalwa ngu shintsha ijubane, amandla nobude bokwehla kwamandla emali nokwehla kwezikhwama zomoya. Futhi, kufezekisiwe futhi ukuthi ingcindezi efakwa yibhantshi nokudlidliza elikhiqizayo kuvunyelaniswa ngaso sonke isikhathi nezithombe eziboniswa isigqoko sokuzivikela sangempela, esivumela abasebenzisi ukuthi bezwe izenzo abazenzayo emhlabeni wabo obonakalayo.
Okwamanje, kufanele silinde ukuqonda kangcono kakhulu uma ngeziphakamiso ezinjengalezi kutholakala kangcono iqiniso langempela emakethe. Njengemininingwane, akutshele ukuthi, ngokusho kokulinganisela, sekuthengiswe cishe ama-virtual system angaba yizigidi eziyi-6.4 emhlabeni jikelele, inani eliphansi kakhulu kunabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-2.600 abadlala noma iyiphi inkundla.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Iqiniso langempela » IDisney ithatha iqiniso langempela isinyathelo esisodwa nale bhantshi elihehayo
I-NVIDIA ekugcineni ikhansela uhlelo lwayo lozakwethu olunempikiswano
Shift kaWaymo: Imoto yakwaGoogle ibandakanyeka engozini